Darjeeling Hill Station Kuenda Kunoshanyira | Dana + 91-993.702.7574 Kutarisa
Makirasi emakomo ari nguva dzose holiday destinations kune vakawanda vevanhu. Hill Stations muIndia ndeyekuda kwechitendero chevanhu vose. Guta reDarjeeling Hill Station Kuenda Kunotora ndiko kupona kwako kwakakwana kubva mumuguta weguta rakanyanyisa uye humidity. Inozivikanwa nokuda kweiyo chaiyo uye munda, Darjeeling ndeimwe yezvivako zvakanakidzwa zvikomo muIndia. Musoro pano nokuda kwezororo rezororo kana kuti nguva inofadza yezororo neshamwari dzako, mhuri nevanoda. Dhijejeeling Hill Station Kuenda Kunoshanyira ndiyo nzira yakanakisisa kwauri, ingave ndeyekuda kwechikwata, kutambira uye kufamba. Nzvimbo dzedu dzezvikomo dzakanyatsogadziriswa dzinofambisa mapuranga muIndia dzichakutora kune izvi zvinotyisa kuenda kune dzimwe nyika muIndia. Yakave yakashongedzwa korona yekubwinya kwekuve mambokadzi wezvivako zvezvikomo zvose munyika. Iyo yakawanda yemhepo yakachena, kunaka kwemazuva ano uye kunakidza kwemamiriro okunze enyika ino inokwezva zviuru zvemakwikwi pasi rose gore. Dhiviyo reDarjeeling Hill Station Kuenda Kunoshanyira kuchapa mukana wekuongorora nzvimbo iyi inofadza. Dzokai kuburikidza neDharijeeling Hill Station Yacho Yokufambisa uye tora bhuku rako rezororo.
05 Nights Programme | Mutambo Wokushanyira: 120
Mushure mokudya kwekudya kwekudya kwekudya Kwekudya kwemukumbiro Kushaya kweInstitute of Tibetology, Dordul Chholten stupa, Rumtek Monastery, Ropeway Ride uye Shanti maonero. Usiku huno huripo kuGANGTOK.
Kushanyira Mangwanani ekutanga Tiger makomo kuti aone kupenya kwezuva kunopfuura kweKanchenjunga Mountains, En-route kushanyira Ghoom Monastery neBatasia loop yakakurumbira. Mushure mekudya kwekudya kwemangwanani kunoshanyira Himalayan Mountaineering Institute, Himalayan Zoo, Japan Temple, Rock Rock, Gangamaya Park neTibetan Handicraft Center, In-route iwe uchava nemafungiro anonakidza eDarjeeling Tea Gardens. Usiku huno huripo paDARJEELING.
Mushure mekudya kwekudya kwekudya Kubva kuBagdogra Airport / New Jalpaiguri Railway station (96 km / 3 hrs) yeRwendo Rwendo. En-nzira Endai Pashupati Market (Nepal Border) uye Mirik Lake (Natural Lake yakakombwa nemakomo nemiti yemipini). Kuratidzwa kunopedzisa.